Vicente del Bosque Oo Shaaciyay Sababta Ay Hoos Ugu Dhacday Qiimahii Ay Lahayd Abaalmarinta Ballon…
Maamulihii hore ee xulka qaranka kubadda cagta Spain iyo naadiga Real Madrid, ninka lagu magacaabo Vicente del Bosque, ayaa sheegay in qiimahii ay lahayd abaalmarinta Ballon d'Or ay hoos udhacday. Del Bosque ayaa wuxuu ku sheegay sababta…
Daafaca Real Madrid Ee Marcelo Oo Si Cajiib Ah Uga Jawaabay Waxa Uu Kula Talin Lahaa Isco
Todobaadkan maamulaha Real Madrid wuxuu sameeyay arrin dood kulul dhalisay, taasi oo ahayd inuu kasoo tegay Isco kulankii Champions League. Los Blancos ayaa wajahaday AS Roma habeenkii Talaadda markaasi oo ay Madrid ku heshay guusha 2-0,…
Santiago Solari Oo Si Adag Uga Jawaabay Eedaynta Ku Saabsan Inuu Keydka Geliyo Xidigo Muhiim Ah
Guuldaradii Eibar waxay wax kasta uga dhigtay Santiago Solari mid aad qaraar u ah, balse, maamulahaan reer Argentina ayaa si adag isaga difaacay eedayn kale oo loo jeediyay. Eedayntaan ayaa waxay tahay inuu keydka dhigo ciyaaryahan muhiim…
Ramos Oo Fariin Cagajugleyn Ah U Diray Xubnaha Diyaariyay Eedaynta Ku Aadan Inuu Daroogo Isticmaalay
Kabtanka naadiga Real Madrid ayaa si cad wuxuu uqirtay in eedaynta ku saabsan inuu adeegsaday daroog ay saameysay isaga. Sergio Ramos ayaa sidoo kale wuxuu gaashaanka ku dhuftay eedaymahaasi, wuxuuna cod dheer ku qeexay inaanu marnaba…
Harry Kane Oo La Waydiiyay Inuu Isbarbardhig Ku Sameeyay Lovren Iyo Ramos Xili Ay Xiisad Ka Dhaxeyso
Daafaca Real Madrid ee Sergio Ramos iyo wiilka dambeedka dhexe uga ciyaara Liverpool ee Dejan Lovren waxaa haatan ka dhaxeysa xiisad aad u daran. Harry Kane, gooldhaliyaha Tottenham, ayaa waxaa la waydiiyay inuu isbarbardhig ku sameeyo…
Marcos Asensio Oo Shuruud Adag Ku Xiray Inuu Real Madrid Ka Caawiyo Guulo Iyo Goolal
Real Madrid ayaa kasoo kabaneysa dharbaaxadii ay ka qaaday bixitaankii Zidane iyo Cristiano Ronaldo, oo mar xalad xasaasi ah ku baxay. Labo macalin ayay naadigi yeelatay tan iyo xiligaasi, taasi oo shaki gelisay inay xili ciyaareedkan…
Ramos Oo Sharaxaad Waafi Ah Ka Bixiyay Sababta Ay Real Uga Maari Karto Ronaldo
Sergio Ramos ayaa sheegay in kooxdiisa Real Madrid ay ka dhan tahay hal ciyaaryahan, kaasi oo uu xusay inuu go'aan saday bixitaanka. Cristiano Ronaldo ayaa kasoo dhaqaajiyay Los Blancos horaantii sanad ciyaareedkan, isaga oo iska dhiibay…
Kabtan Ramos Oo Ka Hadlay Hadii Hoos U Dhac Ay Ku Keeni Karto Cambaareynta Uu Loosoo Jeedinayo
Sergio Ramos ayaa meesha ka saarey in dhaliilaha adag ee loosoo jeedinayo ay isaga ku sababi karaan hoos udhac ku yimaadda muuqaal ciyaareedkiisa. Daafaca birta ah ee xulka Spain iyo Real Madrid ayaa dhaleecaynta wehel unoqday markii ay…
Luka Modric Oo Amaan Ku Rusheeyay Ramos Xili Uu Kabaha La Dulmaray Dadka Dhaliila
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa wajahaya dhaliilo culus oo uga imaanaya bahda ciyaaraha, laakiin saaxiibkiisa Luka Modric ayaa difaacay. Daafaca birta ah ayaa lagu maagay markii uu ku lug-yeeshay arrimo muran dhaliyay, oo ku…